(Dhagayso) Warsidaha Puntlandi oo Warbixin ka diyaariyay Guulaha ay Shacabka Puntland ku gaareen barnaamijkii Iskutashiga
Shacabka Puntland oo kaashanaya dowladdooda ayaa guulo la taaban karo ka gaaray Barnaamijkii ahaa Puntland iyo shacabkeeda ha is kutashadaan.
Waxaa kamid ahaa guulihii laga gaaray:-
1- Soo dhawayntii iyo Ambabixintii loo sameeyay kumanaan Qoxooti Soomaali iyo yamaniyiin isugu jira oo Bosaaso ka soo dagay sandii 2015 kii kuwaas oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yaman iyadoo haatana wali ay soo gaarayaan magaalada Bosaaso dakaasi ka soo cararaya dagaalka ka socda dalka Yaman.
Read more about (Dhagayso) Warsidaha Puntlandi oo Warbixin ka diyaariyay Guulaha ay Shacabka Puntland ku gaareen barnaamijkii Iskutashiga
Dagaalamayaal u dhashay UK oo Suuriya lagu qabtay
Mareykanka iyo Britain ayaa ka yeelanaya wadahadal ku saabsan waxa laga yeelayo laba nin o oak soo jeeda galbeedka London oo bishii la soo dhaafay lagu qabty dalka Suuriya , waxaa sidaasi sheegtay xoghayaha arrimaha gudaha UK.
Read more about Dagaalamayaal u dhashay UK oo Suuriya lagu qabtay
(Dhagayso) Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Oo dil Toogasho ah ku riday Sarkaalkii dilay Abaanduulihii Ciidanka Badda Soomaaliya
Gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed oo ahaa Taliyihii Raxanta Doomaha Badda ee ciidanka badda Soomaaliya, ayaa la isugu daray daraja ka xayuubin iyo dil toogasha ah, kadib dil uu horey ugu geystay Abaanduulihii Ciidamada Badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf (Mariino) 18-01-2018 gudaha Dekadda weyn ee Muqdisho.
Sida subaxnimadii saakay xilliga Muqdisho uu warbaahinta uga sheegay meel fagaara ah G/sare Xasan Cali Nuur Shuute Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida.
Read more about (Dhagayso) Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Oo dil Toogasho ah ku riday Sarkaalkii dilay Abaanduulihii Ciidanka Badda Soomaaliya
Gabdho iskuuley ah iyo macllimiin ayaa waqooyi bari ee dalka Nigeria ka baxsaday weerar ay kooxda Boko Haram ku qaadeen iskuul ah kuwa la seexdo, sida ay ay sheegeen goob joogayaal.
Read more about Gabdho Iskuuley ah oo ka baxsaday Boko Haram
Tartanka kooxaha heerka saddexaad ee caasimadda Puntland ee Garowe, ayaa galabta ka furmidoona garoonka Mir-awaare ee magaalada Garowe.Waxaa tartankaan ka qeybgalidoona 16 koox oo uu qiimayn uu ku sameeyay maamulka ciyaaraha gobolka Nugaal.
Guddoomiyaha ciyaaraha gobolka Nugaal, Siciid Maxamed Cabdi, oo dhawaan xilkaan loo magacaabay ayaa tartankaan qabanaya markii ugu horeysay.
Read more about (VIDEO) Tartanka kubada cagta kooxaha heerka saddexaad oo galabta ka furmaya Garowe.
Maamulka magaalada Gaza ayaa hor istaagay daahfurka telefishin u gaar ah haweenka, daqiiqadii ugu danbeeyey ee lagu waday in uu hawada galo.
Read more about Xamaas oo joojisay furitaan TV-ga Haweenka
Qoraa Sacuudiyaan ah oo dhaliilay qaabka looga aadaamo misaajidadda
Qoraa dalka Sacuudiga u dhashay ayaa wajahaya baaritaan iyo waliba in warbaahinta laga joojiyo ka dib markii uu ku talobixiyay in dalka Sacuudiga ay misaajidyada ku bateen ayna sababeen in la dhibasado.
Read more about Qoraa Sacuudiyaan ah oo dhaliilay qaabka looga aadaamo misaajidadda
Wasiirka arimaha gudaha Puntland ayaa la kulmay hay'adaha ka howlgala deeganada Puntland waxayna ka wada hadleen abaaraha ba'an ee halkaasi ka taagan.
Read more about Puntland oo ka digeysa abaar hor leh oo ku dhufata deegaanadeeda
Dalka Maraykanka waxaa hareeyey dood iyo hadalhayn la xiriirta sidii loo xakameeyn laha hubka dadka shacabka ah laga iibiyo.
Read more about Maxaad ka taqanaa sharciga qaadashada hubka ee Mareykanka?
Wakaaladda wararka ee Suuriya ayaa sheegtay in xoogaga taabacsan dowladda Suuriya ay ka hortagi doonaan dagaalka dowladda Turkga ay ka wado waqooyiga Suuriya
Read more about Suuriya iyo Turkiga oo isku maandhaafsan dagaalka xuduuda labada dal